सिद्धार्थ मल्होत्राले तापसी पन्नुसँग फिल्म खेल्न किन अस्वीकार गरे ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(January 19, 2019)
सिद्धार्थ मल्होत्राले तापसी पन्नुसँग फिल्म खेल्न किन अस्वीकार गरे ?
भदौ ३०, २०७५ शनिबार १९:१९:२६ | उज्यालो सहकर्मी
अभिनेत्री तापसी पन्नु यतिबेला बलिउडकी व्यस्त नायिकाहरु मध्यकी एक हुन् । उनी बर्षभरि जति फिल्ममा काम गरिरहेकी छिन् त्यो अहिले बलिउडकी स्टार अभिनेत्रीहरुका लागि पनि मुस्किलको काम हो ।
साथै उनीद्वारा अभिनित ती फिल्महरुले बक्स अफिसमा ८० प्रतिशत नाफाको व्यापार पनि गरेकै हुन्छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राले भने तापसी पन्नुसँग फिल्ममा काम गर्न अस्किार गरेका छन् ।
यस अघिको खबर अनुसार अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा निर्देशक अनुराग बासुको फिल्ममा तापसीका साथ अभिनय गर्ने बताइएको थियो । तर अहिले भने सिद्धार्थले यस फिल्ममा काम गर्न अस्विकार गरिदिएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
सिद्धार्थले फिल्म छोड्नुको कारण यस फिल्मको छायाँकनको समय तालिका हो । सिद्धार्थले समय अभावका कारण यस फिल्ममा काम गर्न नसक्ने बताएका हुन् । अब दर्शकले अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा र तापसीको जोडीलाई अनुरागको यस फिल्ममा हेर्न पाउने छैनन् ।
अहिले सिद्धार्थले यो फिल्म छोडे पनि उनी निर्देशक अनुरागको पहिलो रोजाई भने थिएनन् । अनुरागले पहिले अभिनेता अर्जुन कपूरलाई यस भूमिकाको लागि प्रस्ताव राखेका थिए । तर अर्जुन कपूरले फिल्म गर्न अस्विकार गरेपछि उनी सिद्धार्थकहाँ पुगेका थिए ।
तर अहिले सिद्धार्थले समेत फिल्म छोडेपछि अनुराग नयाँ अभिनेताको खोजीमा छन् ।
अन्तिम अपडेट: माघ ४, २०७५
दीपिकाको विवाहपछि यी गायिकासँग विवाह गर्दैछन् उनका पूर्वप्रेमी
‘गुत्थी’ र ‘डा‌. गुलाटी’ का नामले चर्चित सुनील ग्रोवर छिट्टै कपिल शर्माको शोमा फर्कँदै
माघ ३, २०७५ बिहिबार
फिल्म निर्माणको तयारीमा दीपक मनाङ्गे
रेडियोका सुपरिचित आवाजः किन रेडियोबाट अन्तै गए ।
नगरबासीसँग मेयर, यस्ता छन् स्थानीयका समस्या
रोकिराखेको बसमा ट्रक ठोक्किँदा तीनजनाको मृत्यु
सुर्खेतमा ‘विप्लव’ नेतृत्व नेकपाको बन्द, दुईवटा ट्रकमा आगजनी
माेबाइलकाे पासवर्ड नदिँदा श्रीमतीले श्रीमानलाई जिउँदै जलाइन्
संचारकर्मी ढकालको हत्यामा संलग्नसहित चारजना पक्राउ
पुरानै लुगा लगाएर मेकअप नगरी नै हिँड्छु : अभिनेत्री सुरक्षा पन्त
मृत भेटिएको चितुवालाई गोली लागेको पुष्टी
कतार विश्वकपमा सहभागी टिमको संख्या बढाउने प्रस्तावमा ६० देश सहमत
बीपीएलमा सन्दीपकाे टाेली आज रंगपुर राइटर्ससँग खेल्दै
ओलीकै पालामा ढुक्कसँग बिदा बस्न मिल्ने !
नेपालमा हिउँ खेलाएजस्तो जाडाे, अष्ट्रेलियामा डढेलाे तापेजस्ता...
भरतपुर महानगरमा ठूला आयोजना : प्रचण्डको साथ, अरु संस्थाको हात
बिहेको मण्डपमै बेहुलीमाथि गोली प्रहार: घाइते अवस्थामै लिइन् सात फेरा